GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
N’oge Jizọs nọ n’ụwa, e nweghị onye sere ya foto ma ọ bụ kpụọ ya n’ihe. N’agbanyeghị ya, kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọtụtụ ndị e seela ya n’akwụkwọ na n’ihe ndị ọzọ.
O doro anya na ndị ahụ sere Jizọs amaghị otú ọ dị n’eziokwu. E nwere ihe ụfọdụ na-ekpebi otú ha si ese Jizọs. Otu bụ omenala ha, ọzọ abụrụ okpukpe ha, nakwa ihe onye sịrị ha see ya chọrọ. Otú ha si ese Jizọs ma ọ bụ na-akpụ ya nwere ike ime ka ndị mmadụ ghọtahie onye Jizọs bụ na ihe ndị ọ kụziri.
Ụfọdụ ndị na-ese Jizọs ya adịrị ka onye na-enweghị ume, nwee ogologo ntutu, nweekwa obere afụ ọnụ, ma ọ bụ ha esee ihu Jizọs, ya adị ka onye ike ụwa gwụrụ. E nwekwara ndị na-ese ya ka onye dị ebube nke nwere ihe dị ka ọkụ gburugburu isi ya ma ọ bụ mee ka o yie ihu atọ ọchị. Ihe ndị a ha na-ese, ọ̀ bụ otú Jizọs dị n’eziokwu? Olee otú anyị ga-esi amata otú ọ dị? Otu n’ime ihe ndị ga-enyere anyị aka ịmata otú ọ dị bụ ịmụ ihe ndị Baịbụl kwuru gbasara ya. Ha ga-enyere anyị aka ịmata otú ọ ga-abụ na ọ dị.
“Ị KWADEBEERE M AHỤ́”
O yiri ka Jizọs ó kwuru ihe a n’ekpere mgbe a na-eme ya baptizim. (Ndị Hibru 10:5; Matiu 3:13-17) Olee otú ahụ́ ahụ dị? Ihe dị ka afọ iri atọ tupu e mee Jizọs baptizim, mmụọ ozi Gebriel gwara Meri, sị: “Ị ga-atụrụ ime, mụọ [Ọkpara Chineke].” (Luk 1:31, 35) N’ihi ya, Jizọs zuru okè otú ahụ Adam zuru okè mgbe e kere ya. (Luk 3:38; 1 Ndị Kọrịnt 15:45) Ọ ga-abụrịrị na Jizọs bụ dimkpa nwoke mara mma. Ọ ga-abụkwa na o nwere otú ya na Meri nne ya, bụ́ onye Juu, si yie.
Jizọs nwere afụ ọnụ n’ihi na ọ bụ ihe e ji ama ndị Juu. Ma, ndị Rom anaghị eruwe afụ ọnụ. Ụdị afụ ọnụ ahụ na-egosi na e kwesịrị ịkwanyere onye nwere ya ùgwù. Ọ naghị eto oké ogologo ma ọ bụ dịrị ghaa ghaa ghaa. O doro anya na Jizọs na-akpụlata afụ ọnụ ya, na-akpụdakwa isi ya ka ọ dị mma n’anya. N’oge ahụ, ọ bụ naanị ndị Naziraịt, dị ka Samsịn, bụ ndị na-anaghị akpụ isi ha.—Ọnụ Ọgụgụ 6:5; Ndị Ikpe 13:5.
Si mgbe Jizọs bụ nwata ruo mgbe ọ dị ihe dị ka afọ iri atọ, ọ nọ na-arụ ọrụ ịkwa nkà. O jighịkwa ngwá ọrụ ọgbara ọhụrụ ndị e nwere ugbu a na-arụ ya. (Mak 6:3) N’ihi ya, ọ ga-abụrịrị na Jizọs siri ike. Mgbe Jizọs malitere ikwusa ozi ọma n’ụwa, o ji aka ya “chụpụ ndị niile chị atụrụ na ehi bịa n’ụlọ nsọ, ọ wụfukwara mkpụrụ ego nke ndị na-agbanwe ego ma kpuo tebụl ha ihu.” (Jọn 2:14-17) Ọ bụ onye siri ezigbo ike ga-emeli ụdị ihe a. Jizọs ji ahụ́ ahụ Chineke kwadebeere ya rụzuo ọrụ Chineke nyere ya. Ọ sịrị: “Aghaghịkwa m izisara obodo ndị ọzọ ozi ọma alaeze Chineke, n’ihi na ọ bụ nke a mere e ji zite m.” (Luk 4:43) Jizọs ji ụkwụ gazuo ebe niile na Palestaịn, na-ekwusa ozi ọma. Ihe a abụghị obere ọrụ. O gosiri na ọ gbasiri ike n’eziokwu.
Jizọs na-emesapụrụ ndị mmadụ ihu. Otú a o si eme mere ka ọ dịrị ‘ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ’ mfe ịbịakwute ya. (Matiu 11:28-30) Otú o si hụ ndị mmadụ n’anya ma na-egosi ha obiọma gosiri na ihe o kwuru na ọ ga-eme ka ndị chọrọ ịmụta ihe n’aka ya nweta ume, bụ eziokwu. Ụmụaka chọdịrị ịbịakwute Jizọs n’ihi na Baịbụl kwuru, sị: “O kukwaara ụmụaka” n’aka ya.—Mak 10:13-16.
Ọ bụ eziokwu na Jizọs hụsiri anya tupu ya anwụọ, ma ọ pụtaghị na ọ bụ onye ike ụwa gwụrụ. Dị ka ihe atụ, o nyeere ndị na-agba akwụkwọ na Kena aka, mee ka mmiri ghọọ mmanya na-atọ ezigbo ụtọ. (Jọn 2:1-11) N’oge ndị ọzọ, ọ kụziiri ndị mmadụ ihe ndị ga-abara ha uru.—Matiu 9:9-13; Jọn 12:1-8.
Karịchaa, Jizọs kụziiri ndị mmadụ ihe otú mere ka ọ gụsiwa ha agụụ ike ịdị ndụ ebighị ebi. (Jọn 11:25, 26; 17:3) Mgbe ndị na-eso ụzọ ya iri asaa si ikwusa ozi ọma lọta ma kọọrọ ya otú ozi ha si gaa nke ọma, ọ gwara ha sị: “Ṅụrịanụ ọṅụ n’ihi na e dewo aha unu n’eluigwe.” Jizọs ‘nwekwara oké ọṅụ.’—Luk 10:20, 21.
“UNU ONWE UNU AGAGHỊ ADỊ OTÚ AHỤ”
Ndị isi okpukpe n’oge Jizọs biri ndụ n’ụwa, na-achọ ụzọ ha ga-esi eme ka ndị mmadụ mara na ha bụ ndị isi ha ma na-akwanyere ha ùgwù pụrụ iche. (Ọnụ Ọgụgụ 15:38-40; Matiu 23:5-7) Ma Jizọs adịghị ka ha. Ọ gwara ndịozi ya ka ha ghara ịna-eme ndị ọzọ ka “à ga-asị na ọ bụ ha nwe ha.” (Luk 22:25, 26) Jizọs gwadịrị ha, sị: “Lezienụ anya maka ndị odeakwụkwọ bụ́ ndị na-achọ ka ha yiri uwe mwụda na-ejegharị ma na-achọ ka a na-ekele ha n’ọma ahịa.”—Mak 12:38.
Jizọs anaghị eme onwe ya ka ọ pụọ iche n’ebe ndị ọzọ nọ. O nwedịrị oge ọ na-adịrịghị ndị mmadụ mfe ịmata ya n’ebe ìgwè mmadụ nọ. (Jọn 7:10, 11) Jizọs na ndịozi ya iri na otu kwesịrị ntụkwasị obi nọrọ, ị gaghị eji otú ọ dị n’anya mata ya. Ọ bụ ya mere Judas ji sị na ọ ga-esusu Jizọs ọnụ ka ọ bụrụ “ihe àmà” ndị ọ ga-arara ya nye ga-eji amata ya.—Mak 14:44, 45.
Ọ bụ eziokwu na Baịbụl ekwughị ọtụtụ ihe gbasara otú Jizọs dị, o doro anya na otú ọtụtụ ndị si esekarị ya abụghị otú ọ dị n’eziokwu. Ma, e nwere ihe kwesịrị ịdị anyị mkpa ugbu a karịa ịma otú Jizọs dị n’eziokwu. Ọ bụ ịma otú anyị si were Jizọs taa.
“N’OGE NA-ADỊGHỊ ANYA, ỤWA AGAGHỊKWA AHỤ M ỌZỌ”
Awa ole na ole Jizọs kwuchara ihe a, ọ nwụrụ, e liekwa ya. (Jọn 14:19) O nyere ndụ ya ka ọ bụrụ “ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ.” (Matiu 20:28) N’ụbọchị nke atọ ọ nwụchara, Chineke kpọlitere ya ka “mmụọ” ma “mee ka ọ pụta ìhè,” n’ihu ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya. (1 Pita 3:18; Ọrụ Ndịozi 10:40) Olee otú Jizọs dị mgbe ahụ ọ pụtara n’ihu ha? O doro anya na ọ dị iche n’otú ha sibu mara ya n’ihi na ndị na-eso ụzọ ya ha na ya na-esokarị amatalighị ya ozugbo. Meri Magdalin chere na ọ bụ onye na-elekota ubi ebe ahụ e liri ya. Ndị na-eso ụzọ ya abụọ nọ na-aga Emeọs chere na ọ bụ onye mbịarambịa n’obodo ahụ.—Luk 24:13-18; Jọn 20:1, 14, 15.
Olee otú anyị kwesịrị isi were Jizọs taa? Mgbe ihe karịrị afọ iri isii Jizọs nwụrụ gachara, Jọn onyeozi hụrụ Jizọs n’ọhụụ. Jọn ahụghị Jizọs ka onye na-anwụ anwụ a kpọgidere n’elu obe. Kama, ọ hụrụ “Eze nke ndị eze na Onyenwenụ kasị ndị nwenụ niile,” Eze nke Alaeze Chineke, onye ga-ebibi ndị iro Chineke niile ma ndị bụ́ mmụọ ma ndị bụ́ mmadụ n’oge na-adịghị anya, gọziekwa ndị niile na-erubere Chineke isi ruo mgbe ebighị ebi.—Mkpughe 19:16; 21:3, 4.
Ihe ndị Jizọs kụziri na ihe ndị o mere nke dị́ n’akwụkwọ Matiu, Mak, Luk, na Jọn nwere ike ịgbanwe ndụ gị.